နည်းပညာ - ဝီကီပီးဒီးယား
နည်းပညာဆိုသည်မှာ ကိရိယာ (tool) နှင့် အတတ်ပညာ (craft) များကို သိရှိနားလည်ခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် နည်းပညာသည် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်များနှင့် ဆက်စပ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အဆိုပါပညာရပ်နှစ်ခုမှ ဆင့်ပွား၍ နည်းပညာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ နည်းပညာ(Technology )ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏ မူလအစမှာ ဂရိစကား"Technologia" ဖြစ်သည်။
လူသားတို့၏ နည်းပညာအပြိုင်သုံးစွဲ မှုမှာ သဘာ၀ရင်းမြစ်များကို ရိုးရှင်းသောကိရိယာများအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်းမှ စတင်သည်။ သမိုင်းမတင်မီခေတ်က မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သော စွမ်းရည်ကို ရရှိလာသောကြောင့် စားစရာတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ် နိုင်သကဲ့သို့ နောက်ပိုင်းတွင် ဘီး (Wheel) ကို တီထွင်မှုကြောင့် လူသားတို့၏ ခရီးသွားလာရေးတွင် ပိုမိုလွယ်ကူ လာခဲ့သည်။ သမိုင်းတလျှောက် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်သည့် ပုံနှိပ်စက်၊ တယ်လီဖုန်း နှင့် အင်တာနက် တို့ကဲ့သို့သော နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုများကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးတွင် ကြုံတွေ့ရသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးများလျော့နည်းလာပြီး လူသားတို့အနေဖြင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် နည်းပညာအားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်ပေ။ တင်းပုတ်မှအစပြု၍ နျူးကလီးယားလက်နက်အထိ အဖျက်စွမ်းရည် တစ်စထက်တစ်စကြီးမားလာသောလက်နက်များသည် သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပိုမိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။
၁ သိပ္ပံ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် နည်းပညာ
၂.၁ ကျောက်ခေတ်ဟောင်း (နှစ်ပေါင်း ၂.၅ ဘီလျံယံမှ ၁၀,၀၀၀ နှစ်အထိ)
၂.၁.၃ အဝတ်အထည်နှင့် အမိုးအကာများ
၃ ကျောက်ခေတ်သစ်မှသည် ရှေးဂရိ၊ ရောမခေတ်သို့
၃.၂ စွမ်းအင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
၃.၃ အလယ်ခေတ်မှသည် ယနေ့ခေတ်နည်းပညာများဆီသို့
သိပ္ပံ၊ အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်နှင့် နည်းပညာ[ပြင်ဆင်ရန်]
ကျောက်ခေတ်ဟောင်း (နှစ်ပေါင်း ၂.၅ ဘီလျံယံမှ ၁၀,၀၀၀ နှစ်အထိ)[ပြင်ဆင်ရန်]
အလွန်ရိုးရှင်းသော စွမ်းအင်ရင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး များပြားကြီးကျယ်လှသော အသုံးဝင်မှုရှိသည့် မီးအား ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် အသုံးပြုတက်ခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်တို့၏ နည်းပညာဆင့်ကဲပြောင်းလဲခြင်း၏ အရေးပါသော အလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မီးအား မည့်သည့်အချိန်၌ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ကို အတိအကျမသိရှိရသေးသော်လည်း Cradle of Humankind ရှိ မီးလောင်ကျွမ်းနေသော တိရစ္ဆာန်အရိုးများအရ မီးအား ယဉ်ပါးအောင်အသုံးပြုခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း ၁ သန်း(1 Ma) မတိုင်မီကဟု ယူဆရပြီး ပညာရှင်များ၏ သဘောထားအရ Homo erectus များ မီးအား ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းသည် နှစ်ပေါင်း 500 နှင့် 400 ka အကြားတွင် ဟုဆိုကြသည်။ သစ်များနှင့် မီးသွေးများအား လောင်ကျွမ်းစေခြင်းဖြင့် ရရှိလာသော မီးများသည် အစောပိုင်းလူသားများအား သူတို့၏ အစားအစာများအား ချက်ပြုတ်စားသောက်စေနိုင်ခြင်းသည် အစာချေချက်အားကို ကောင်းမွန်လာစေရုံမက အာဟာရဓာတ်များလည်း တိုးလာစေပြီး စားသုံးနိုင်သော အစာအစားအမျိုးအစားများ များပြားလာစေခဲ့သည်။
ကျောက်ခေတ်ဟောင်းတွင် အခြားသော တိုးတက်လာခဲ့သည် နည်းပညာများမှာ အဝတ်အထည်နှင့် အမိုးအကာများဖြစ်ပြီး ထိုသည်တို့ အသုံးပြုနိုင်ခဲ့သည် အချိန်ကို အတိအကျဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ သို့သော် ဤသည်တို့မှာ လူသားတို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အဓိကအချက်များ ဖြစ်ကြသည်။ ကျောက်ခေတ်ဟောင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင် လူသားများနေထိုင်ရာ အိမ်တို့သည် ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားလာပြီး ပိုမိုအသေးစိတ်လာသည်။ အစောဆုံး နှစ်ပေါင်း 380 ka လောက်တွင် လူသားများသည် ယာယီအသုံးပြုနိုင်သော သစ်တဲများ ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ အဝတ်အထည်များသည် အမဲလိုက်၍ရသော တိရစ္ဆာန်များ၏ သားမွေးနှင့် သားရေများကို လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် ပြင်ဆင်ခြင်းမှ ရရှိလာခဲ့ပြီး အအေးပိုသောဒေသများသို့ လူသားများပျံနှံခြင်းကို အထောက်အကူပေးနိုင်ခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်း 200 ka လောက်တွင် လူသားများသည် အာဖရိကအပြင်ဘက်သို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြပြီး ယူရေးရှားကဲ့သို့သော တိုက်ကြီးများသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။
ကျောက်ခေတ်သစ်မှသည် ရှေးဂရိ၊ ရောမခေတ်သို့[ပြင်ဆင်ရန်]
ဘီးကို တီထွင်နိုင်မှုသည် ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စစ်ပွဲများအတွက် တော်လှန်ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘီးများ တီထွင်ပြီးသည်နှင့် လေးလံသော ဝန်များကို သယ်ဆောင်ရန်အလို့ငှာ ဘီးတပ်လှည်းများကို တီထွင်နိုင်မှုသည်လည်း များမကြာခဲ့ပေ။ အလွန်မြန်သော အိုးထိန်းစက်များအား အသုံးပြုလာနိုင်ခြင်းဖြင့် အိုးများအား အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်လာခဲ့သည်။ ဘီးများကို စွမ်းအင်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်း(ရေရဟတ်၊ လေရဟတ်၊ သီးနှံ့ချွေလှေ့စက်)အဖြစ် အသုံးပြုလာနိုင်မှုသည် လူသားမဟုတ်သော စွမ်းအင်များအား အသုံးပြုလာနိုင်ရန်အတွက် ပြောင်းလဲမှု တစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။
↑ Science (2016)။
↑ Intute: Science, Engineering and Technology။ Intute။ 17 February 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mother of man – 3.2 million years ago။ BBC။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Human Evolution။ History Channel။ 23 April 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bower၊ Bruce။ "Stone Agers Sharpened Skills 55,000 Years Earlier Than Thought"၊ WIRED၊ October 29, 2010။
↑ Crump၊ Thomas (2001)။ A Brief History of Science။ Constable & Robinson။ p. 9။ ISBN 1-84119-235-X။
↑ Fossil Hominid Sites of Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai, and Environs။ UNESCO။ 10 March 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Stone Age Man။ History World။ 10 March 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 February 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ O'Neil, Dennis။ Evolution of Modern Humans: Archaic Homo sapiens Culture။ Palomar College။4April 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 31 March 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Villa၊ Paola (1983)။ Terra Amata and the Middle Pleistocene archaeological record of southern France။ Berkeley: University of California Press။ p. 303။ ISBN 0-520-09662-2။
↑ Cordaux, Richard (2003). "South Asia, the Andamanese, and the Genetic Evidence for an 'Early' Human Dispersal out of Africa" (PDF). American Journal of Human Genetics 72 (6): 1586–90; author reply 1590–93. doi:10.1086/375407. PMID 12817589. PMC:1180321. Archived 1 October 2009 at the Wayback Machine.
↑ University of Chicago Press Journals။ "The First Baby Boom: Skeletal Evidence Shows Abrupt Worldwide Increase In Birth Rate During Neolithic Period"၊ ScienceDaily၊ January 4, 2006။
↑ Sussman, Robert W. (April 1972). "Child Transport, Family Size, and Increase in Human Population During the Neolithic". Current Anthropology 13 (2): 258–67. University of Chicago Press. doi:10.1086/201274.
↑ Ferraro, Gary P. (2006)။ Cultural Anthropology: An Applied Perspective။ The Thomson Corporation။ ISBN 0-495-03039-2။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Patterson, Gordon M. (1992)။ The ESSENTIALS of Ancient History။ Research & Education Association။ ISBN 978-0-87891-704-4။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Cramb၊ Alan W။ A Short History of Metals။ Carnegie Mellon University။ 8 January 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 January 2007 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Chisholm, Hugh (1910)။ The Encyclopædia Britannica: A dictionary of arts, sciences, literature and general information။ Encyclopædia Britannica။ p. 708။ 17 May 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "The significance of the composition of excavated iron fragments taken from Stratum III at the site of Kaman-Kalehöyük, Turkey" . Anatolian Archeological Studies 14.
↑ "Ironware piece unearthed from Turkey found to be oldest steel"၊ The Hindu၊ March 26, 2009။ 30 September 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 29 March 2009။
↑ "The oldest representation ofaNile boat" . Antiquity 81.
↑ Potts၊ D. T. (2012)။ A Companion to the Archaeology of the Ancient Near East။ p. 285။
↑ Childe၊ V. Gordon (1928)။ New Light on the Most Ancient East။ p. 110။
↑ Anthony၊ David A. (2007)။ The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World။ Princeton: Princeton University Press။ p. 67။ ISBN 0-691-05887-3။
↑ Gasser၊ Aleksander (March 2003)။ World's Oldest Wheel Found in Slovenia။ Republic of Slovenia Government Communication Office။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နည်းပညာ&oldid=740003" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ ဧပြီ ၂၀၂၂၊ ၀၅:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။